रश्मी आचार्य उपाध्यक्ष अनेरास्वबियु
स्वबियु निर्बाचन हुन्छ ?
विगत ८ बर्ष देखि हुन नसकी रहेको स्ववियु निर्वाचन यहि फाल्गुन १४ गते गर्ने भनि त्रिविले जुन तालिका प्रकाशित गरेको छ, यसबाट निवार्चन हुने बलियो आधार तयार भएको छ । अब बल विद्यार्थी संगठनहरुको कोर्टमा छ । जसले जिते र हारे पनि सिंगो विद्यार्थी आन्दोलनलाई विजयी बनाउन विद्यार्थी संगठनहरु यो समयमा चुक्नु हुदैन । त्यसैले निर्वाचन हुन्छ र जुन सुकै मूल्य चुकाएर भए पनि गर्नु पर्छ ।
स्वबियु निर्वाचनको लागि अनेरास्वबियुको तयारी कस्तो छ ?
हाम्रो संगठनको तयारी राम्रो छ । हामी सबै हिसावले तयारीमा छौं । संगठनले तयार पार्ने घोषणा पत्रका लागि सुझाव संकलन भइरहेको छ, आन्तरिक छलफल तिव्र गतिमा अगाडी बढेका छन् । उमेदवार छनौटका लागि सबैलाई मान्य हुने खालको उपुयक्त र वैज्ञानिक विधि तयार पार्दैछौं । समग्रमा भन्नु पर्दा तयारी दु्रत गतिमा अगाडी बढेको छ ।
कुन संगठनले पहिलो स्थानमा आउँला ?
यसपाली निर्वाचन सम्पन्न गराउने कुरा नै प्रथमतःविद्यार्थी आन्दोलनको जित हो । जहाँ सम्म विद्यार्थी संगठनहरु विचको प्रतिषर्धा छ त्यसमा हिजो देखि आज सम्म अनेरास्ववियु पहिलो बन्दै आएको तथ्य यसपालि पनि स्थापित हुनेछ । अधिल्ला निर्वाचनमा हामीले गुमाएका क्याम्पसहरुमा समेत जित्दै छौं ।
अनेरास्वबियुले जित्ने आधार के हुन ?
स्पष्ट शैक्षिक दृष्ट्रिकोण, राष्ट्रियताको पहरेदार, जनजिविका मुद्दाहरुको प्रवक्ता, विद्यार्थीहरुको सुख दुखको साथि, चुस्त र सुदृढ संगठन नै अनेरास्ववियुले जित्ने मुख्य आधारहरु हुन् । विद्यार्थी सहुलियतको आन्दोलन, सर्टिफिकेटको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था, भूकम्प पछि चलाएको पुननिर्माण अभियान लगायत थुप्रै कामहरु जसले अनेरास्ववियुलाई आमविद्यार्थी माझ चिनाएको छ यी नै हाम्रा जित काअधारहरु हुन् । जुन हाम्रा प्रतिष्पर्धीहरु संग छैनन् ।
स्वबियु निर्वाचनमा उमेरहदको आबश्यक्ता थियो ?
यस विषयलाई सापेक्षतामा हेर्नु पर्छ । स्ववियुलाई कक्षामा नियमित रुपले पढिरहेका विद्यार्थीहरुको बनाउनु पर्छ भन्ने मूलमर्म यसले अंगिकार गरेको छ । जुन राम्रो पक्ष हो तर स्ववियु निर्वाचन नियमित नभएको सन्दर्भमा एक पटकलाई यो खुल्ला राख्नु पर्दथ्यो भन्ने मतलाई पनि अन्यथा ठान्नु हुदैन । २८ बर्षे उमेर हद तोक्नु कति उपयुक्त कति अनुपयुक्त यसको समीक्षा भविष्यले अवश्य गर्नेछ यद्दपी उमेरहद तोक्ने कुराले विद्यार्थी आन्दोलनमा नयाँ बहस थालनी भएको छ । स्ववियु माथि उठेका कयौ प्रश्नहरुलाई यस निर्णले सकारात्मकजवाफदिन सक्छ वा सक्दैन त्यसले नै यसको औचित्यता पुष्टी गर्नेछ ।